DEG DEG:- Wareegtadda uu madaxweyne C/weli Gaas kasoo saaray xarunta madaxtooyadda Puntland (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wareegtadda uu madaxweyne C/weli Gaas kasoo saaray xarunta madaxtooyadda Puntland (AKHRISO)
Wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa xilka gudoomiyaha cusub ee maxkamada sare Puntland loogu magacaabay Yuusuf Xaaji Nuur, kadib markii lakala diray maxkamadii hore ee maamulkaas oo waqtigeedii dhamaaday.
Yuusuf Xaaji Nuur ayaa horey usoo noqday gudoomiyihii maxkamada sare ee maamulka Puntland xilligii halkaasi uu madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistee C/laahi Yuusuf Axmed, wuxuuna sidoo kale ahaa gudoomiyaha xafiiska gargaarka sharciga ee Puntland.
Sidoo kale, Yuusuf Xaaji Nuur ayaa lagu xusuustaa inuu ka hor yimid muddo kororsigii uu sameysatay Korneel C/laahi Yuusuf sanadkii 2001-da, xilligaas oo isagoo ah gudoomiyaha maxkamada sare ee Puntland uu xukmiyay inay sharci darro tahay muddo kororsigaasi, taasoo markii dambe keentay in madaxweyne ku-meel-gaar ah uu ka noqdo maamulkii Puntland ee kala qeybsamay.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ee maamulka Puntland oo kulan degdeg ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada maamulkaasi waxay ku meel mariyeen guddigaan uu madaxweyne C/weli Gaas magacaabay.
Nuqul ka mid ah wareegtadda uusoo saaray ayaa soo gaaray warbaahinta Bulshoweyn, waxayna u qorneyd sida hoos ku xusan:-